» मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा दोहोरिने इच्छा छैन् : अध्यक्ष कटुवाल
२ पुष २०७७, बिहीबार १६:३२
मकवानपुरमा उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल यसवर्ष सकिँदै छ ।
वि.स २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वले के–कस्तो काम गर्‍यो ? व्यवसायीको हितको निम्ति कस्तो कदम चाल्यो ? कोरोना महामारीबीच सरकारले जारी गरेको लकडाउन अवधिमा के कस्तो पहलकदमी भयो ? प्रस्तुत छ, यी विषयहरुमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालसँग नवयुग डटकमका संवाददाता रुपेश थापाले गरेको कुराकानीः–
१. मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायीहरुको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
– मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायीहरुको अवस्था साँच्चै नै कठिन छ । कोभिड–१९ को कारण ८–९ महिनादेखिको लकडाउन, वर्षा, दशैँ तिहार देखि लिएर यो अवस्थासम्म व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको छ ।
राज्य तर्फबाट केहि सम्बोधन भएको छैन् । बैंकको ब्याजदेखि लिएर तिर्न पर्ने पैसाहरु, करका कुराहरु, विभिन्न पाटोहरु, तिर्न पर्ने कार्यका पाटो यथावट छ । आउन पर्ने आम्दानी कतैबाट राम्रो छैन् । बजारमा केहि भिडभाड देखिएता पनि बजार व्यवसायहरु, उद्योगधन्दाहरु, सहज रुपमा सञ्चालन भैसकेको अवस्था छैन । व्यवसायीहरुलाई साह्रै पीडा भएको बेला छ यो ।
२. कोरोना कहरले थला परेका व्यवसायीहरुलाई, लकडाउन अवधिमा उद्योग वाणिज्य संघले के कस्तो सहयोग गयो ?
– हामीले व्यवसायीहरुलाई भनेर असोज मसान्तसम्म मेम्बरसिपको मंसिर मसान्तसम्मको जरीवाना नलाग्ने निर्णय गर्यौँ । हामीले विभिन्न बैँकहरुसँग समय समयमा लबिङ्ग गरिरहेका छौं ।
यो महामारीको बेलामा हाम्रो व्यवसायीहरुलाई तुरुन्तै किस्ता, ऋण, सावाँ चाहियो भनी दबाव नदिनुस्, यो सम्बन्धि कुरा नगर्नुस् भनि हाम्रो जिल्लाको पहलमा आफ्नो प्रदेश भरि नै यो कुरा राखिएको छ । घरेलु साना उद्योगका कार्यलयमा धेरै वर्ष देखि रोकिरहेको नविकरणलाई यो महामारिको कहरमा जरिवाना नलाग्ने र पुरानो नविकरण नहुने अवस्था थियो । यसलाइ केहि सहजता बनाउन प्रदेश सरकार र उद्योग मन्त्रालय कुरा राखी उहाँहरुले प्रस्ताव स्वीकार गरी सहज बनाउनु भएको छ । यो महामारीको समयमा सबै सहयोग गर्छु भनेर गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले अन्यत्र भन्दा हामीले हेटौँडाको बजारलाई निकै सहज बनाएका छौँ । समग्रमा बजार सहज त छैन तै पनि अन्य जिल्ला नगर भन्दा हेटौँडाको बजारलाई निकै सहजता बनाएका छौं ।
३. मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन नजिकि रहँदा, आफ्नो कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने लाग्छ ?
– मेरो कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर मैले भन्दा तपाईँहरुले, बाहिर विभिन्न साधरण सदस्यहरुले, हाम्रो नजिकबाट नियाल्नु भएका अन्य वर्गले हेर्ने हो । म आफैले राम्रो गरेँ, धेरै गरेँ भन्नु भन्दा पनि हामीले गर्न सक्नेसम्म राम्रो गरेको जस्तो लाग्छ । संस्थागत सुधारहरु, संस्थाको आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउनका लागि, एउटा पल्पसा अतिथि सदन अब हामी तयार गर्ने अवस्थामा छौँ । फिनिसिङ कामहरु भैरहेको छ ।
विभिन्न कर्मचारीहरुको क्षमताहरु, चुस्तताका कुराहरु, सचिवालयलाई सहज बनाउने कुराहरु, व्यवसायीलाई सहजता बनाउने कुराहरु सामाजिक कार्यहरु, विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुमा हामी छदैछौँ । सँगसँगै अहिलेलाई संस्थागत सुधार पनि गरौँ भनेर मेरो कार्यकालमा विशेष जोडका साथ हेरिरहेको छु । साथीहरु सबैलाई एक ढिक्का बनाएर लिएर गइराखेको छु । अहिलेसम्म बोर्ड भित्रको बैठकमा कुनै पनि विवाद भएको अवस्था छैन् । समग्रमा मेरो कार्यकाल कस्तो भयो भन्ने मूल्याङ्कन यहाँहरुले गर्ने हो ।
४. तीन वर्षे कार्यकालमा मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायी एवम् सरोकारवालाहरुबाट कस्तो सहयोग पाउनु भयो ?
– सर्वप्रथम लगभग तीन वर्ष अगाडी चुनावमा राम्रो मतका साथ जिताएर यहाँसम्म पुर्‍याइदिनु भयो, सबैभन्दा पहिलो समर्थन त्यही नै हो । सँगसँगै तीन वर्षभरी नै काम गर्ने अवधिमा समग्र साधारण सदस्यहरुले, हाम्रो बोर्डमा रहेका साथीहरुले, कर्मचारीहरुले, हामीसँग विभिन्न समितिमा रहेका साथीहरु, हामीसँग साझेदारीमा रहेका नगरपालिका, जिल्ला समन्वयन समिति, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, मिडियाका साथीहरु, सबैले सहजतापूर्वक काम गर्न दिनु भएको छ । उहाँहरुले काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाइदिनु भएको छ । यथार्थ कुरामा कतै हाम्रो केहि छुट्यो होला, केहि कमजोरी भयो होला, अधिकांश कुराहरुमा जिल्लाभरीका समग्र पक्षले सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण दिनुभयो । कुनैसँग केही विवाद छैन् । दुईवटा साधारण सभा सबैसँग निकै सहजसँग सफल गरेको छौँ । अहिले पनि बोर्डसभा हामी एकदम सहजसँग गर्छौँ । प्रविधिको विकास गरेका छौँ । यी विभिन्ने काम गर्नका लागि स्टेकहोल्डरहरु सबैले नै आज सहयोग गर्नुभएको छ । र कार्यकालको अन्तिम चरणमा आएका छौँ । सबैपक्षले सहयोग गरेकै कारण यहाँसम्म आएका हौं ।
५. आफ्ना कार्यकालमा भएका राम्रा कामहरुलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
– हामीले कोरियासँगको सम्बन्ध निकै राम्रो बनायौँ । कृषिको विषयमा केही गर्नुपर्छ भनी हामी लागि परिरहेका थियौँ । त्यहीअनुसार हामीले कोरियामा कृषि पढ्न पठाउन हामीले एमओइ गरि सकेका छौँ ।
मुख्यमन्त्रीसँग यो विषयमा राम्रो छलफल भएको थियो । मकवानपुर जिल्ला कृषिका क्षेत्रमा बसेर तालिम दिने तयारीमा थियौँ। यो महामारिले हाम्रो केहि कार्यक्रमहरु रोकियो ।
पश्चिम क्षेत्रमा करीब १० वर्ष देखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन भने हामीले त्यो साधारण सभालाई सहजताका साथ अवतरण गरेर त्यहाँका नेतृत्व परिवर्तन गरीसकेका छौँ । हामीले हाम्रो कार्यकालमा गर्नु पर्ने अधिकांश कामहरु गर्यौा । विभिन्न गाउँपालिकाहरुसँगको सम्बन्ध निकै सुधार बनाएका छौँ ।
मनहरीमा भएको आगलागी पिडितहरुलाई सहयोग गर्ने, हामीले यस महामारीको विषयमा गर्न पर्ने समन्वयन गरेका छौं ।
हालसालै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा हाम्रो आफ्नो जिल्लाको निर्णय अनुसार पठाएको उम्मेदवारलाई जिताएका छौं । निकै लामो समय पछाडि मकवानपुर जिल्लाले केन्द्रमा नेतृत्व पाउन सफल भएका छौं । देशका विभिन्न जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघमा राम्रो सम्बन्ध बनाइराखेका छौँ । यी हाम्रा कार्यकालका प्रगती हो भन्ने लाग्छ ।
६. यहाँलाई संघमा फेरि दोहोरिने इच्छा छ भन्ने सुनिन्छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– बजारमा जाँदा सबै ठाँउका मानिससँग कुरा गर्दा र बोर्डका धेरै साथीहरुले पनि एक कार्यकाल तपाइँ दोहोरिनु भए राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै साथिहरुको भनाइ छ । म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले सकभर दोहोरिने पक्षमा छैन । तर अझै चुनाव आउन २/३ महिना बाँकी छ । म आफ्नो व्यवसाय तिर फर्कनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर पनि वातावरणले के अवस्था देखाउँछ, राजनीतिक कुराहरुले, साथीहरुको भोलिको कुराहरु कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो । बोर्डमा एकमत भएर जान सकिएला, नसकिएला, भोलिको केहि अप्ठ्यारो परिस्थितीले आएर उठ्न सक्ने अवस्था एकातिर छ , अन्यथा म नउठ्ने भन्ने मनसायमा छु ।
७. अब आउने नेतृत्वले के–के काम गर्नु पर्ने देख्नु हुन्छ ?
– स्थानीय तहहरुसँग मिलेर गर्न पर्ने सहकार्यहरु, धेरै कामहरु छन् । ती कामहरु हामीले गर्न सकेका छैनौं । कृषिका विषयमा विभिन्न पार्टहरु जोडिएर राखिएको छ । अब कार्यान्वयनमा ल्याउने पाटो यहि चैत, वैशाखबाट सुरु हुन पर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा आएर गर्न पर्ने थियो । त्यो कामहरु कोरोनाको महामारीले गर्दा केहि रोकिएको छ । त्यो काम तुरुन्तै अगाडि बढ्न पर्ने छ । सरकारले कृषिको लागि विभिन्न सहुलियतमा ऋणहरु, बिना धितोका ऋण, धितामा ऋणका कुराहरु छन् । व्यवसायमा जान्न पर्ने तालिमका कुराहरु छन् । यी धेरै कामहरु छन् ।
अहिले बनाउन पर्ने भवनको काम पनि आउने कार्यकालको लागि एउटा दायित्वको रुपमा रहन्छ । पल्पसाको गेष्ट हाउस हामीले बनाएता पनि अहिले भै रहेको पल्पसा केहि जीर्ण भएको अवस्था छ । त्यो पल्पसालाइ भत्काएर अथवा पुर्ननिर्माण गरेर त्यसलाई अहिलेको बजारले के माग्छ त्यो अनुसार आधुनिक भवन बनाउन पर्ने जरुरी छ ।
वोर्डलाइ पनि तालिमको अभाव रहेको छ । विभिन्न किसिमका तालिमहरु वोर्डलाइ पनि दिन पर्ने छ । अब आउने कार्यकालका साथीहरुलाई चुनौतीहरु भनौँ अथवा उहाँहरुलाई अवसर पनि हो । यो अब आउने बोर्डको दायित्व पनि हो ।